Imishini ye-XCMG Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Imishini yemishini ye-XCMG
I-XCMG excavator XE235C Ukuhlelwa okuphelele nokusatshalaliswa kwemithambo ye-asi kunengqondo kakhulu ukufeza ukuzinza okungcono kokuhamba kanti isivinini sokuhamba esiphezulu sifinyelela ku-40km / h ukuthola isivinini sokudlulisa indawo esheshayo.
XCMG motor ibanga
I-XCMG motor grader isebenzisa i-Dongfeng Cummins 6BTA5.9-C180-II injini kadizili ene-turbocharged, ene-torque enkulu yokukhipha namandla okusetshenziswa kwe-coefficient kanye ne-low fuel fuel.
I-XCMG roller yomgwaqo
UMinyan uhlala egcina ifilosofi yesevisi ethi "Running On Faith, Keep Promise, Gxila Kokukhathazeka Kwekhasimende", sizinikela kulokho okudingwa yikhasimende, futhi sinikeze imikhiqizo nensizakalo ngokusebenza okuphezulu nentengo enhle.
XCMG iloli crane
Amasu ayisishiyagalombili we-patent aqinisekisa ukulondolozwa okubushelelezi, okuphezulu kanye nokonga amandla wezinhlelo zokuphakamisa, ukujikeleza, nokugoqa.
Umthwalo wesondo le-XCMG
Umthwalo osindayo wesimo esinamadwala; idivaysi esebenzayo nengaphambili nohlaka lwangemuva ifaka ibhodi eliwugqinsi lamandla aphezulu, ukusatshalaliswa okufanelekile namandla okuthwala aqinile.